I-B2B Podcasting 101 | Martech Zone
I-B2B Podcasting 101
NgoLwesibili, ngoJuni 14, i-2011 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Njengoba kungenzeka usuvele uyazi, sinomsakazo wamasonto onke obukhoma njalo ngoLwesihlanu ngo-3PM. Kusetshenziswa IBlogTalkRadio, lowo mbukiso bese ufakwa kungobo yomlando bese i-podcast iphushelwa ku-iTunes. Ngaphandle kwekhwalithi yomsindo, iBlogTalkRadio iyaqhubeka nokudlula engikulindele.
Njengoba uphenya i-Intanethi ukuthola izeluleko nge-podcasting, kunemininingwane eminingi kwisoftware efana nayo Ukuziphendulela or IGarageband ukuthuthukisa umsindo wakho, abadlali abazoshumeka kusayithi lakho, okokuthenga, bese kufanele uphambanise ngokubhalisa nokulayisha i-podcast ngayinye ku-iTunes. Lo ngumsebenzi omningi kakhulu eqenjini lethu… ngakho-ke IBlogTalkRadio yisisombululo esiphelele.
NgeBlogTalkRadio, esikudingayo yifayela le- umbhobho omuhle futhi Skype ukuxhumana nezivakashi… empeleni awuzidingi lezo, ungavele uthinte ifoni yakho futhi usukulungele ukuya! I-BlogTalkRadio ikhipha i-switchboard entsha, ekuvumela ukuthi uphathe kalula umbukiso wakho, izivakashi zakho, nomsindo owengeziwe ongaletha kuwo. Ngaphezu kwalokho, i-BTR ikuvumela ukuthi uhlanganise umbukiso wakho ne-Facebook ne-Twitter ukuze izimemezelo zombukiso zithunyelwe ngokuzenzekelayo ziholele bonisa (isici esimangalisayo).
Njengombukiso we-B2B, isu lethu lihluke kakhulu kwimibukiso ehlobene nabathengi:
Asilandeli isibalo sabalaleli abaningi… sifuna ukukhulisa izithameli zabamaketha nabasebenza ngezimboni.
Siphishekela abaholi bezokumaketha nezobuchwepheshe ukuxhumana nabo embukisweni. Akuyona nje iqhinga lokuba namagama amakhulu kulolu hlelo kubalaleli abaningi, futhi kuyisu lokuqinisekisa ukuthi amagama ethu abizwa ngokungaguquki kuleyo mibuthano efanayo.
Siphishekela ochwepheshe bezentengiso abasebenza ezinkampanini ezinkulu. Ngamanye amagama, sikhomba amaklayenti angaba khona ukuthi abekhona ohlelweni! Lokhu kungazwakala kukubi, kepha kuyasebenza impela. Sizoqhubeka nokuletha abaholi bezimakethe nezinkampani ze-Fortune 500 kulolu hlelo. Zizobaluleka zombili izilaleli futhi zisinikeze ithuba lokwethula esikwenzayo kubo.
Njengoba i-podcasting ingekho lula, ababhali abaningi, ama-blogger, kanye nabaholi bezimboni bazogxuma ngethuba lokuthi babe kumdlalo. Awekho ama-podcast amaningi laphaya njengoba kukhona amabhulogi… ngakho-ke ithuba lokuzwakala liphezulu kakhulu. Kuyinzuzo yabo (neyakho) ukufika kuleyo mibukiso.
Lokho kusho… asihuduli umuntu embukisweni ukuze simthengise kanzima. Sibanikeza izethameli zokuzikhangisa, inkampani yabo namasu abo futhi sinikeze izeluleko noma ingxoxo maqondana nakho. Uma isivakashi sikwazisa impendulo yethu, kuhlale kunethuba lokuqhubeka nobudlelwano ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Sikhomba imigomo yePodcast ngo:
Ukunikeza ifomu lokuxhumana kubhulogi yethu. Ochwepheshe bezobudlelwano bomphakathi baxhumana nathi nsuku zonke ngezinkundla - eziningi zazo zingamathuba amahle wombukiso.
Thola ama-blogger ngokusebenzisa ukuseshwa kwebhulogi, IPostRank futhi Technorati ezikhuluma ngezihloko ezifanayo.
Thola amanye ama-Podcasters ezinhlelweni ezifana iTunes futhi Stitcher.
Thola ababhali ezincwadini ezisanda kukhishwa ngezihloko esikhuluma ngazo. Ababhali bazama njalo ukukhipha igama ezincwadini zabo kanti ama-Podcast ahlinzeka ngethuba elihle. Ababhali abaningi bazogxuma ngethuba. Thola isayithi labo bese uxhuma nabo.
Nyusa umbukiso ngo- ukuhlanganisa uhlelo lomsakazo kubhulogi yakho namakhasi omphakathi. Ama-Podcast anikeza ithuba elihle lokuthi abantu basebenze futhi balalele… okuthile i-blog engakunikeli. Ukulalela futhi isinyathelo esikhulu sokufunda… ngoba uzwa amathoni wezwi. Kungasiza abalaleli bakho bakhe ukwethembana nawe ngokushesha okukhulu.
UJun 15, 2011 ngo-9: 35 AM
Uthande umbukiso wakho, ngeke uhlale uwubamba bukhoma, ngakho-ke kumnandi ukufaka phansi ama-podcast, bese ulalela uma nginesikhathi.
Bengilokhu ngisebenzisa i-podcasting ngisebenzisa okurekhodwe ngesandla ne-Audacity isikhashana, kepha iBlogTalk Radio ilula kakhulu. Ngisahlela uhlelo lokugcina ngaphambi kokuthi ngililayishe ku-itunes futhi sengiqalile ukufaka isixhumanisi kwezinye zezinhlelo ezithandwa kakhulu kuziphakamiso zethu.
Sizofunda kuwe njengoba sizama ukwakha ababukeli bohlelo lwethu lwamabhizinisi amancane ngoLwesithathu ngo-10: 30.